Uphi uMthetho weeNtsholongwane eziMngciphekweni?
UMthetho weeNtsholongwane zoMngcipheko we-1973 (i-ESA) unikezela ulondolozo kunye nokukhuselwa kweentlobo zezityalo kunye nezilwanyana ezijongene nokutshatyalaliswa kunye "neendawo eziphilayo ezithembele kuzo." Iintlobo kufuneka zengozini okanye zisongelwe kuyo yonke inxalenye ebalulekileyo yazo. I-ESA ithathe indawo yeNdawo yokuLondolozwa koLondolozo lweeNtsholongwane ka-1969; I-ESA ihlonyelwe amaxesha amaninzi.
Kutheni sifuna umThetho weeNtshontsho eziNgcipheko?
UGeorges De Keerle / Getty Izithombe zeMidlalo / i-Getty Izithombe
Iirekhodi zeFossil zibonisa ukuba kwizilwanyana ezidlulileyo kunye nezityalo ziye zaphela ixesha lokuphila. Ngekhulu lama-20, izazinzulu zazingxhala malunga nokulahlekelwa kwezilwanyana eziqhelekileyo kunye nezityalo. I-ecologists ikholelwa ukuba siphila kwixesha lokukhawuleza kwezinto ezinokukhawuleza ezithathwa ngabantu, ezifana nokuvuna kakhulu kunye nokuhlaziywa kweendawo (kuquka ukungcola nokuguquka kwemozulu).
Lo Mthetho ubonakalise utshintsho kwiingcinga zenzululwazi kuba lujonge uluntu njengoluhlu lwezinto eziphilayo; Ukuze sikhusele iintlobo, kufuneka sicinge ukuba "zinkulu" kunezo zityalo.
Ngubani owayenguMongameli xa i-ESA isayinwe?
URiphablikhi uRichard M. Nixon. Ekuqaleni kwekota yokuqala, uNixon wadala iKomiti yeeNgcebiso zeSizwe kuMgaqo-nkqubo wendalo. Ngowe-1972, uNixon watshela isizwe ukuba umthetho okhoyo wawungenako ukwenza "ukugcina iintlobo ezilahlekayo." Kwaye uBonnie B. Burgess, uNixon "akazange acele iCongress ngemithetho eqinile yokusingqongileyo ... [wakhuthaza iCongress ukuba idlule i-ESA." (iphe 103, 111)
I-Senate yadlulisela ibhili-mali ngokuvota ngezwi; kwiNdlu, 355-4. UNixon wasayina umthetho ngomhla wama-28 kuDisemba 1973 (PL 93-205).
Ngubani otyunjwe nguMthetho weeNtsholongwane?
Inkonzo yeeNxweme kaNowa yeSizwe soLwandle (iNMFS) kunye ne-US Fish and Wildlife Service (USFWS).
Kukho "iQela likaThixo" -Komiti yeKomiti yeeNtshonkotha, eyakhiwe yiintloko zekhabhinethi-ezinokugqithisa uludwe lwe-ESA. Iqela likaThixo, elidalwe yiNgqungquthela ngo-1978, ladibana okokuqala ngqa phezu kwenqanawa (kwaye yalawula ukuba intlanzi ayinakunceda.) Yadibana kwakhona ngo-1993 ngaphaya kwesiqhwithi esenyakatho. .
Iyintoni Impembelelo Yomthetho?
UMthetho weeNtsholongwane oMngciphekweni wenza kubekho mthethweni ukubulala, ukulimaza okanye "ukuthatha" iintlobo eziluhlu. "Ukuthatha" kuthetha "ukuhlukumeza, ukulimaza, ukuphandelela, ukuzingela, ukudubula, ukulimaza, ukubulala, ukubamba umgibe, ukuthatha, ukuqokelela okanye ukuzama ukubandakanya nayiphi na indlela yokuziphatha."
I-ESA idinga ukuba isebe elilawulayo likarhulumente liqinisekise ukuba nayiphi na imisebenzi eyenziwa ngu rhu lumente ayinako ukuphazamisa nayiphi na iindidi ezidweliswe okanye kubangele ukutshatyalaliswa okanye ukuguqulwa kakubi kwendawo yokuhlala ekhethiweyo. Ukumisela kwenziwa ngokuhlolwa ngokuzimeleyo kwezenzululwazi yi-NMFS okanye i-USFWS, kungekhona yinkampani.
Kuthetha ukuthini "Ukubhalwa" phantsi kwe-ESA?
Umthetho ubona "iindidi" ezimele zingengozini xa zisengozini yokuphela kuyo inxalenye ebalulekileyo yoluhlu lwayo. Iintlobo zihlelwe ngokuthi "zisongelwa" xa kungenzeka ukuba zenzeke ngokukhawuleza. Iindidi eziye zachongwa njengezingongelo okanye ezisesengozini zijongwa "zidweliswe."
Kukho iindlela ezimbini eziza kuluhlu lweentlobo, nokuba i-NMFS okanye i-USFWS ingaqalisa uludwe okanye umntu okanye inhlangano inokucela ukuba kuneentlobo ezidweliswe.
Zingaphi Iintlobo Ezidibeneyo Zikho?
Ngokutsho kwe-NMFS, kukho iindidi ezi-1,925 ezidweliswe njengengozi okanye ezisesichengeni phantsi kwe-ESA. Ngokubanzi, i-NMFS ilawula iintlobo zezilwanyana zasolwandle kunye "nezidalwa ezinamafutha"; I-USFWS ilawula iintlobo zamanzi kunye namanzi ahlambulukileyo.
Izinga lonyaka lohlu lwenyuka lize lugunyazwe nguGeorge W. Bush.
I-Nixon / Ford: uludwe lwe-23.5 ngonyaka (47 iyonke)
I-Carter: 31.5 uluhlu ngonyaka (126 iphelele)
Reagan: 31.9 uluhlu ngonyaka (255 inani)
GWH Bush: 57.8 uluhlu ngonyaka (231 iyonke)
UClinton: uluhlu lwama-65.1 ngonyaka (521 iyonke)
GW Bush: uluhlu lwe-8.0 ngonyaka (60 iyonke, ngoMeyi 2008)
Usebenza njani ngoMthetho weeNtsholongwane?
Ukususela ngo-Agasti 2008, iindidi ezingama-44 ziye zanyanzeliswa: 19 ngenxa yokuphulukana, ezili-10 ngenxa yeenguqu kwi-taxonomy, ezithoba ngenxa yokuphela, ezintlanu ngenxa yokufumanisa abantu abaninzi, enye ngenxa yephutha, kunye nenye ngenxa yokulungiswa kwe-ESA. Ezinye iindidi ezingama-23 ziye zatshatyalaliswa zisengozini. Iintlobo ezimbalwa eziphambili zilandelayo:
I-Bald Eagle: yanda ukusuka kwi-417 ukuya kwi-11,040 yeebini phakathi ko-1963 no-2007; zisuswe kwiluhlu
I-Deer Deer eFlorida: yanda ukusuka kuma-200 ngo-1971 ukuya ku-750 ngo-2001
I-Grey Whale: yenyuka ukusuka kuma-13,095 ukuya kuma-26,635 imikhomo phakathi ko-1968 no-1998; zisuswe kwiluhlu
I-Peregrine Falcon: yanda ukusuka ku-324 ukuya kuma-1,700 amabini phakathi kuka-1975 no-2000; zisuswe kwiluhlu
I-Crane ephikisayo: yenyuka ukusuka kwi-54 ukuya kwi-436 iintaka phakathi ko-1967 no-2003
Inkulu (ingxabano) Iimpawu ze-ESA
Ngomnyaka we-1978, iNkundla ePhakamileyo yenze isigqibo sokuba uluhlu lwentambo yokukhangela inyoka (inhlanzi encinci) lithetha ukuba ukwakha iTamente leTellico kwakufanele kume. Ngomnyaka we-1979, umrhumo-mali weebhanti waxolela iDam kwi-ESA; ibhayiseti yebhilidi yavumela i-Tennessee Valley Authority ukuba igcwalise idama.
Ngo-1990, i-USFWS ibonise i-owls ebonakalayo njengongongelo. Ngo-1995, kwi-"Sweet Home [Oregon]" isigqibo, iNkundla Ephakamileyo iqinisekisile (6-3) eguqula indawo yokuhlala ibhekwa "ukuthatha" kwintlobo. Ngaloo ndlela, ukulawulwa kwendawo yokuhlala kungadluliselwa ngu-USFWS.
Ngo-1995, iCongress yasetyenziselwa ukukhwela imali kwi-ESA, ukubeka umyalelo wokuba ulandelelaniswe kuzo zonke iintlobo zeentlobo zezilwanyana kunye nezikhundla eziphambili zeendawo zokuhlala. Emva konyaka, iCongress yakhulula umgibeli.
Amaphuzu avela kwiMbali: UMthetho weeNtsholongwane
Ngowe-1966: I-Congress yadlulisela uMthetho wokuLondolozwa kweeNkcazo eziKhuselekileyo ekuphenduleni ukuxhalabisa malunga nekhaneli yokukhwela. Ngomnyaka kamva, i-USFWS yathengela indawo yokuqala yokuphila kwezilwanyana ezinobungozi, ii-2,300 ii-hektare eFlorida.
Ngowe-1969: I-Congress yadlulisela uMthetho woLondolozo lweeNkcazo zeNgcipheko. I-Pentagon yayibhikisha uluhlu lwentlobo yesilwane, kuba yayisebenzisa ioli ye-sperm-whale kwiimitha zasemanzini.
Ngowe-1973: Ngoxhaswa nguMongameli uRichard Nixon (R), iCongress yadlulisela uMthetho weeNtshontsho eziNgcipheko.
Ngo-1982: I-Congress yalungisa i-ESA ukuba ivumele abanikazi bepropati yabucala ukuba baphuhlise izicwangciso zokulondoloza ulondolozo lwezilwanyana eziluhlu Izicwangciso ezinjalo zixolela abanikazi "ukuthatha" izigwebo.
> UMthetho weeNtsholongwane
> I-Quiz Act Quiz (Word Doc)
> Imbali ye-ESA
> NOAA - NMFS
> Umbhalo woMthetho we-Sspecies oMngcipheko (7 USC 136, 16 USC 1531 kunye neq.).
Ingqwalaselo yeeNgxaki eziPhakathi kweeSikisi zezilwanyana
IsiGaba sokuThuthukiswa kweNkundla yoLwaphulo-mthetho
Ukuchaza i-Missime and Why It Can Be Big Deal
'Ingoma yeKhisimesi yokuqala yeNoweli
Ukuthenga I-Cigar Lighter
Ukuhlaziywa kwe-MI Guitar nge-Magic Instruments
Indima yokutya kwi-Evolution of Jaw Human
Yiyiphi iProtheyini eninzi kakhulu?
Ungayisebenzisa i-ATF kwi-Transmission Manual?
Amagama asePersi asePersian njengeMigqaliselo yokuQinisekisa koLuntu kunye nabahlobo
Yintoni Engalungile Ngeebrakes Zami?
Ixesha leeNyanga ezine-iNzululwazi, uLwazi kunye neCandelo loPhando lweNtlalo